မဝသေးဘူးတဲ့ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 9, 2021 Author admin	Comments Off on မဝသေးဘူးတဲ့
အလုပ်မရှိ လက်ယားလက်ယား လုပ်နေတဲ့အချိန် . ကျနော်တို့ အိမ်ဘေးက ကိုစိုးမင်းက နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ သူတွေကို ပို့ပေးတဲ့ ပွဲစားပါ ။ ကိုစိုးမင်းက သူတယောက်ထဲ အလုပ်များလို့ အားရင် ဝင်ကူပါဆိုတော့ ကျနော်လဲအားနာလို့ ကိုစိုးမင်းအလုပ်တွေကို ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတာပေါ့ ကိုစိုးမင်းတို့အိမ်မှာ အန်တီနု ဆိုတဲ့ သူ့အဒေါ် အပျိုကြီး တစ်ယောက်ရှိပါတယ် . ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တော်တော်တောင့်တယ်ဗျ နို့ကြီးက အကြီးကြီး ဖင်ကြီးကလဲ အယ်နေတာပဲဗျာ ….။
အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် ကိုစိုးမင်းကို ကျနော် အလုပ်ကူလုပ်ပေးတာ အန်တီနု နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နေချင် လို့ပါ ။ လူပျိုဖြစ်ခါစ ဆိုတော့ ဖင်ကြီးကြီး မိန်းမတွေဆို အရမ်းကြိုက်ဗျ ။ ဒီလိုနဲ့ ကိုစိုးမင်းကို ကူလုပ်ရင်း အန်တီနု ကို ကြံနေတာပေါ့ ။ အန်တီနုနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နေပြီး သူ့ ဖင်ကြီးတွေ နို့ကြီးတွေကို ကြည့်ရတာ လီး အရမ်းတောင်တယ်ဗျာ ။ ဖြစ်ချင်တော့ တစ်နေ့ ကိုစိုးမင်း နဲ့ ကျနော် မြို့ထဲကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတော့ အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်တွဲတွေ သူတို့အိမ်မှာကျန်ခဲ့ပါရော ။
လူငယ်ပီပီ ကျနော်ပဲပြန်ယူရတာပေါ့ဗျာ။ သူတို့အိမ်ရောက်တော့ …တံခါးကြီးက ပွင့်နေပြီး ဘာသံမှမကြားတာနဲ့အိမ်ပေါ်တက်ကြည့်တော့ အန်တီနုက ထမိန်ရင်လျား နဲ့ သနပ်ခါး လိမ်းနေပါတယ်။ ကျနော်လဲ ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ အသာရပ်ကြည့်နေတာပေါ့ ဒေါ်ကြီးက ထမိန်ကိုအောက်လျောပြီး ရင်မွှာနှစ်ခုကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိမ်းနေပြန်တယ် .ကောင်းကောင်း မမြင်ရလို့ ကျနော် ရှေ့ကိုအတိုး .. အခန်ထောင့်က အမှိုက်ပုံး နှင့် ပုဆိုး ငြိကာ ” ဒုန်း ဂလွမ်း ” ဟု အသံထွက် သွားလေသည်။
အသံကြောင့် ဒေါ်ကြီးလန့်ဖျန့်ပြီး နောက်လှည့်ကြည့်ကာပြေလျော့နေသော ထမိန်ကို ရင်လျား လိုက်ပါသည်။ရှက်လဲရှင်သွားတယ်ထင်ပ . ထို့နောက် ကျနော်က ” ဒေါ်ကြီးကလဲဗျာ ဘာမှမဝတ်ထားဘူး ရှက်စရာကြီး ” ဟု စကားစ လိုက်သောအခါ … ” နင်က မြင်လို့လား ” ဟု ပြန်မေးသည်။ကျနော်က ” ကျနော်ပြန်ရောက်နေတာကြာပြီ အကုန်မြင်တယ် ” ဟု ပြောလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဒေါ်ကြီးက ” ဖိုးသဲ နင် အကုန်မြင်တာ တကယ်လား ” ” ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောနဲ့နော် ” ” ငါမုန့်ဝယ်ကျွေးမယ် ” ဟုပြောသည်။
ကျနော်က” ကျနော်မုန့်မစားချင်ဘူး ဒေါ်ကြီး ” ဟု ပြောတော့” ဟဲ့ နင်က ဘာစားချင်တာလဲ ” ဟု ပြန်မေးသည်။” ကျနော့်ကို နောက်တခါပြရင် ဘယ်သူ့မှ မပြောဘူး”ဟု ပြောလိုက်ရာဒေါ်ကြီးကတွေဝေသွားပြီးနောက်တကယ်နော် ဆိုပြီး ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်ရာ .. အားပါးပါး ! တော်တော်ကြီးတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးဗျာ . အမွှေးတွေကထူပြီး မို့မို့ဖောင်းဖောင်းကြီး .. .. ကျနော်လဲ မျက်လုံးက စောက်ဖုတ်ကနေ မခွာတော့ဘူး …။
ထိုအခါ ဒေါ်ကြီးက .. ” ဖိုးသဲရယ် နင့် မျက်လုံးလဲ ငါ့ စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သွားပါအုန်းမယ် ” ပြောပြီး ထမိန်ကိုပြန်ဝတ်ဖို့ ကုန်းလိုက်တယ် ။ ကျနော်က” ဒေါ်ကြီးရယ် နေပါအုန်း ” ဆိုပြီး ထမိန်ကို ဆွဲလိုက်တော့ အရှိန်လွန်ပြီး ဒေါ်ကြီးနို့ကြီးကို လှမ်းကိုင်မိလိုက်တယ် ။ ထို့နောက်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဟု စိတ်ထဲတွေးပြီး ….” ဒေါ်ကြီး ကျနော်မရတော့ဘူဗျာ ” ဆိုပြီး အတင်းဖက်ကာ ဒေါ်ကြီး ရဲ့ နို့တွေကို ကုန်းစို့လိုက်တယ် ။လက်ကလဲ စောက်စေ့လေးကို ဖြေးဖြေးခြင်း ပွတ်တာပေါ့ … ။
ခန နေတော့ ဒေါ်ကြီး တအင်းအင်း နဲ့ညည်း သံလေး ကြား ရပြီး . တကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်လာပါတယ် ။ . ကျနော်လဲ အခန်းထဲ က သူ့ ကုတင်ပေါ် အသာလေး လှဲ သိပ်ပေးလိုက်တော့ . အားမရလို့ထင်တယ် .. ကျနော့်ခေါင်းကို အတင်းဆွဲပြီး သူ့ ပေါင်ကြားထဲ ညှပ် လိုက်ပါတယ် ။ ကျနော်လဲ ဒီအဘွားကြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကို မှုတ်ခိုင်းတာ နေမှာလို့တွေးပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပါးစပ်နဲ့ တေ့ လိုက်တယ် ။ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် ကျနော် တခါမှ မလိုးဖူးဘူးဗျ …..။
ဗွီဒီယိုလောက်ပဲ ကြည့်ဖူးတာ .. ကြည့်ဖူးသမျှ ဗွီဒီယိုထဲက ပညာတွေ အကုန်ထုတ်သုံးတာပေါ့ ။ ဒေါ်ကြီးစောက်စေ့ကို လျှာနဲ့ ထိုးကလိပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို ၃.၄.၅ချက်လောက် အားရပါးရလျှက်လိုက်တော့ ဒေါ်ကြီးကော့တက်သွားတယ်။ စောက်စိကြီးကို လျှာနဲ့ ထိုးရင်း လက်ခလယ်နဲ့ စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးလိုက်တော့ အင်း အားဆိုပြီး ကျနော်ဆံပင်ကို လာဆွဲရောဗျာ …. ကျနော်လက်ကို ခပ်မြန်မြန်လေး ထိုးလိုက်သွင်းလိုက် လုပ်တော့။
အားးး ရှီးးး ကောင်းလိုက်တာ ဖိုးသဲရယ်ဒေါ်ကြီးစောက်ဖုတ်ထဲ လီးထည့်ပြီး လိုးပေးပါတော့လို့ အရမ်းဖီးလ်တက်နေတဲ့ အသံနဲ့ ပြောပါတယ် ။ဒါကြောင့် ကျနော် အပေါ်ကနေ တက်ခွလိုက်တယ် .ဒေါ်ကြီးက ကျနော့်လီးကြီးကို လှမ်းကိုင်ပြီး ဟယ် လို့ အသံထွက်လာတယ် ။ ကျနော့်လီးကရှည်တယ်ဗျ ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အကိုတွေမြှောက်မြှောက်ပေးလို့ ရေချိုးတိုင်း ဆွဲဆွဲပေးတာ .. ဒေါ်ကြီးက ဖိုးသဲရယ် နင့်ဟာက လူနဲ့တောင်မလိုက်ဘူးတဲ့ ။
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ တေ့လိုက်ပြီး အစေ့ နဲ့ ပွတ်လိုက်တော့ ကျနော် ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထသွားတယ်ဗျာ ။ ဒီလို အရသာမျိုး တခါမှ မခံစားဖူးဘူးဗျာ ။ ပြီးတော့ ဒေါ်ကြီးက ဒီလိုကိစ္စတွေကျွမ်းပြီး အတွေ့အကြုံ ရှိနေပါလားလို့ အံ့ဩနေတာ . အမှန်က ဒေါ်ကြီး ငယ်ငယ်က ရည်းစား ထားပြီး ခဏခဏ လိုးဖူးတယ်ဆိုတာ နောက်မှ သူပြောပြလို့ ဒေါ်ကြီးက ကျနော့်လီးကိုကိုင် သူ့ စောက်ဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး ဖိုးသဲလိုးလေ ဒေါ်ကြီး အရမ်းခံချင်နေပြီ လို့ ပြော ပါသည်။
ကျနော်လဲ လီးကို ဖြေးဖြေးခြင်း ထည့်ပြီး ညှောင့်လိုး လိုက်ပါတယ်..။ အားးး ရှီးးး ဖိုးသဲရယ် ဒေါ်ကြီးကို မညှာ နဲ့ ဆောင့်ဆောင့် နာနာလေး ဆောင့် ဆိုပြီး ကျနော့် ခါးကို ဆွဲကာ အော်နေပါတယ်. . ကျနော်လဲ စိတ်ကြွပြီး အားရပါးရ လိုးဆောင့် လိုက်တော့ အား ကောင်းလိုက်တာ ယောကျာ်း ရယ် အားရပါးရလိုးပါ လို့ အော်ပြီး သူ့ခါး ကို ကော့ကော့ပေးပါတယ် .. သူ့အသံကြားလေ ကျနော်လဲဖီးလ်ပြီး အားရပါးရ လိုးဆောင့်လေ ပေါ့ဗျာ ။
အချက် ၇၀ ဆယ် လောက် ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီးတော့ တအားအား နဲ့ ကျနော့် ကို အသေဖက်ပြီး ဒေါ်ကြီး ပြီးသွားတယ် ။ ကျနော် လဲ ဆယ်ချက် ခန့် ဆောင့်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်တယ်။ဒေါ်ကြီး ကာမ အရသာ အဆုံးစွန်ထိရောက်သွားသလို ကျနော်လဲ အရမ်းကောင်းသွားပါတယ် ။ခနနေတော့ ဒေါ်ကြီး စောက်ဖုတ်ထဲ စိမ်ထားတဲ့ လီးကိုချွတ်ပြီး သေးသွားပေါက်မယ် လုပ်တော့ ဖိုးသဲရယ် နေပါအုန်း ဒေါ်ကြီးမဝသေးဘူးတဲ့ ။
တော်တော်ထန်တဲ့ ဒေါ်ကြီးဗျာ ။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် လစ်ရင်လစ်သလို လိုးကြပါတယ် ။ တခါ ကိုစိုးမင်းကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ နယ်ဘက် ကို ခရီးထွက်တော့ကျနော်နဲ့ဒေါ်ကြီးတို့အကြိုက်လိုးကြတာပေါ့ ။ အောကားတွေ အတူကြည့်ပြီး အဲ့ ထဲကအတိုင်း လိုးနည်းပေါင်းစုံ့ လိုးကြတာပေါ့ ။ ညားခါစ လင်မယားတွေထက်တောင် ဆိုးသေးဗျာ …… ပြီးပါပြီ။
အတင့်ဟု အများက ခေါ်ကြသော တင်မေလှသည် တော်တော်လှသည်။ အိုးကလည်း လုံးကျစ်နေသည်။ ကိုယ်လုံးကလည်း သွယ်သွယ်လေး။ ရင်ကို ကြည့်ဦး မလား စွင့်စွင့်ကားကားလေး။ ဟိုကောင် မင်းထိုက်နဲ့ လားလား မှ မတန်။ ဖိုးဇော် အဖို့ သိပ်မခက်လှ။ သူ့ဖခင်က ရွာမှာ ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ရသည့် သူဌေးကြီး။ သြဇာကလည်း ကြီး။ ပြီးတော့ လုပ်သမျှကလည်း တင့်တယ်။ ဖိုးဇော်၏ ဖခင်နာမည်က သာအောင်။ ခန့်ခန့်ညားညား ဝတ်စားတတ်ပြီး တကယ့် လူကြီး လူကောင်း စတိုင်က အပြည့်။ လောင်းကစားလုပ်ပြီး အကြွေးဗရဗျစ်နဲ့ လူတယောက်၏ သမီးလေးကို အကြွေးသိမ်းပစ်လိုက်သည်တောင် အများက သူ့အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရအောင် အကွက်ဆင်တတ်သေးသည်။ ကြည့်လေ အဖေဖြစ်သူက ဖဲသမား။ အရှုံးက […]
ကျနော်တို့ရွာကနည်းနည်းခေါင်တယ်။အိမ်ခြေငါးရာလောက်တော့ရှိတယ်။ရွာမှာကဓလေ့ထုံးစံလေးတွေရှိကြတာပေါ့ဗျ။လူငယ်တွေပီပီအ ပျော်လွန်တာလဲရှိတယ်။ပြသနာမတက်အောင်တော့ရွာကကာလသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းခန့်မောင်ကထိန်းရတယ်။သူကမိန်းမရှိတယ်ဆရာမပေါ့။ဒါပေမယ့်တနယ်မှာကျောင်းပြနေရတယ်။သုံးလတကြိမ်လောက်တော့ပြန်လာလေ့ရှိတယ်။မိန်းမကအိမ်မှာမရှိတော့ရွာအလုပ်ကိုလည်းကူလုပ်လေ့ရှိတာမို့ကာလသားခေါင်း ဆောင်အဖြစ်တာဝန်ပေးထားရတယ်။အခု လည်းကျနော်တို့သူ့တဲအိမ်မှာစတေးချရင်း ထွေရာလေးပါးပြောနေကြတာပါ။ဒီမှာကသူ့ခြံရှိတော့အေးဆေးနေလို့ရတယ်။ “ဟေ့ကောင် ငရဲ” “ဘာတုန်းဟ” “မင်းယောက်ဖဇိုးကြီးလာနေပြီ” “အာတိုးတိုးပြောပါဗျ။ကြားသွားလို့အိမ် တောင်မလည်ရဖြစ်မယ်” “အေးပါကွ ငါတို့မသိချင်ယောင်ဆောင်ပါ့မယ် “”ဟုတ်ကိုမင်းခန့်” “ဟေ့ကောင်တွေဘာလုပ်နေကြလဲ ” “အေး ကွာ ငါတို့ညကြက်ခိုးပြီးချက်စားမလို့” “ဟေ ဟုတ်လား ” “ဟေ့ကောင်တွေငါမပါဘူးနှော်” “ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုမင်းခန့်” “ဟာ ဒီနေ့မင်းအမလာမယ်လေကွာ” “ဟာ ဒီနေ့တော့ ကိုမင်းခန့်ငလျှင်လှုပ်မှာပေါ့” “ဟားးဟားးလှုပ်မှာပေါ့ကွ” “သိပါတယ်ခင်များကြီးငတ်ပြတ်နေတာ” “ဟားးဟားးး ဖျံသိုရှိသေးလားကိုမင်း” “မင်းဘာလုပ်မလို့လဲ”. “စမ်းကြည့်ချင်လို့” “အေး ရှိသေးတယ်” “ကျနော်နည်းနည်းမျှ” “အေးပါကွာ” “ဒါနဲကိုမင်းရွာထဲမသွားဘူးလား၊အရက်ကလေးဘာလေးဝယ်ဖို့” “သွားမယ်ကွာ မင်းတို့ဒီမှာရှိတုန်း” “ဟုတ်ကျနော်တို့ဒီမှာရှိနေမယ်” “အေးဒါဆိုငါသွားလိုက်ဦးမယ်”. ကိုမင်းခန့်အပြင်ရောက်သွားတော့” “ဟေ့ကောင်တွေ” “ငရဲ ဘာလဲဟ” “ဒီနေ့ဆရာမလာမှာကွ၊ဒီလူကြီးအပြတ်ဆော်မှာသေချာတယ်။” “အေးလေငတ်ပြတ်နေတာပဲဆော်မှာပေါ့” “အေး ငါတို့ဒီညလာချောင်းရအောင်” “ကောင်းသားပဲ” “နေအုံးငါအကြံတစ်ခုရတယ်။ […]
ရွှေရည်ဝင်းထိန် ဘ၀ ရှေ့တက်လမ်း အတွက် ရန်ကုန်မြို့ကို လာခဲ့သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်အတွက် ဧရာမ စွန့်စားခန်းကြီး တခု ဖြစ်သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်သည် အဖေနဲ့ အမေ အတန်တန် တားတဲ့ကြားက ကြီးပွားတိုးးတက်ဖို့ ထွက်ခဲ့လိုက်သည် ။ အမေ့ဖက်က ဆွေမျိုးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာ စရောက်ရောက်ချင်း ခဏနေသည် ။ ချက်ချင်း အလုပ် မရလို့ အလုပ်ရှာနေတာနဲ့ တပတ်မက ကြာသွားသည် ။ ဆွေမျိုးအိမ်ကို အားနာတာကြောင့် ဘာရရ လုပ်မည်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တဆိုင်ဝင် တဆိုင်ထွက် လိုက်မေးသည် ။ အလုပ်တောင်းသည် ။ “ စူပါ ဂလုပ် ” ဆိုတဲ့ စူပါမားကက်ကြီးမှာ အရောင်း ၀န်ထမ်း အလုပ် […]